Radio Laliguras Fm 105.2 MHZ काठमाडौँको धुलोभन्दा सरकार बिखालु |
“बाबु ! एक्कासि सास बढ्यो, बाँच्दिनजस्तो लाग्न थाल्यो ! तैँले कोही डाक्टर चिनेको छैनस्, घरमै बोलाउन पाए हुन्थ्यो । अस्पताल जाने आँटसमेत छैन ।”
बाले चुरोट छाड्नुभएको वर्षौं भइसकेको थियो । मध्यपानको लती पनि होइन उहाँ । तर, काठमाडौँ आएको दुई महिनामै बालाई लगातारको खोकीले थलै बसाल्ला जस्तो भयो ।
तारन्तारको खोकी । खोक्दाखोक्दै मुर्छा परेजस्तै हुने । नजिकैको औषधि पसलबाट खोकीको औषधि ल्याएर चिकित्सकको सल्लाहमुताबिक नै नखुवाएको पनि होइन । खोक्दाखोक्दै नाकमुखबाट र्‍यालसिँगान पो निस्कन थाल्यो, निको हुनु त परको कुरा !
डाक्टरको सिफारिसमै दुई बोतल औषधि रित्याउँदा पनि बीस को उन्नाइस भएन र नजिकैको मेडिकल कलेज पुर्‍याएँ ।
चिकित्सकले लामो सास लिन आग्रह गर्दै छातीको जाँच गरे र भने, “छातीको एक्स रे र खकारको जाँच पनि गरौँ न !”
ढल्कँदो उमेर । लगातारको खोकीले अताल्लिएका थियौँ हामी । रिपोर्ट आएलगत्तै चिकित्सकको कक्षमा पुग्यौँ र चेकजाँचको कागज देखायौँ । एप्रोनसमेत लगाउन भ्याएका थिएनन् उनले । भित्री कक्षमा लगे र भन्न थाले, “काठमाडौँ असाध्यै प्रदूषित छ । बा’लाई धूलोका गम्भीर एलर्जी भएछ । औषधि त लेखिदिउँला तर काठमाडौँ मै बस्नुभयो भने निको हुने ग्यारेन्टीचाहिँ लिन सक्दिनँ । धुलाले फोक्सोमै अघात गरिसकेछ । हिजोआज यस्ता बिरामी मकहाँ दैनिक ५० को संख्यामा आउँछन् । मैले सबैलाई यही सल्लाह दिने गर्छु ।
धुवाँधुलोले यहाँको हावा नै विषाक्त भइसक्यो । काठमाडौँमा युवा त बस्न नसक्ने भइसके, वयोवृद्धहरूले कसरी सास फेर्नु ?”
“बूढेसकालमा हात बसेपछि छोराकहाँ आएका बाबुलाई गाउँमै जानूस् कसरी भन्नू ? पाल्नुपर्ला भन्ने गाह्रोले गाउँ जाऊ पो भन्यो भन्ठान्ने हो कि,” धेरै दिन असमञ्जसमा परेँ म ।
चिकित्सकको सल्लाह अटेर गरेर काठमाडौँकै धुवाँधुलोमा हिँडाए दम नै निस्कने खतरा बढेपछि ढुंगाकै मुटु बनाएर बाबुलाई घर पठाएँ । निकै लाचार भएँ त्यसदिन म ।
जोरपाटीमा पसल व्यवसाय गर्ने एकजना आफन्तले सुनाएको पीडा हो यो । सहरको अव्यस्थाले आक्रान्त ती मरीचझैँ चाउरिएका थिए ।
बौद्धमा फर्निचर व्यवसाय गर्ने एक पसलेले खाटको खुट्टामा त्यस्तै तीन चारवर्षका बालकलाई बाँधेका रहेछन् । दैनिकजसो आँखा परिरहन्थ्यो । “बालक विलाङ्ग रहेछन् क्यारे, कहीँ नजओस् भनेर होला,” दुईचारपटक त सामान्यीकरण गरेँ तर मनले मानेन ।
पाँचौँ दिन बालककी आमालाई सोधेँ, “बालकलाई खाटको खुट्टामा बाँधेर किन यातना दिनुभएको ?”
“जहिल्यै सडकमा गइरहन्छ । अस्ति त ऊ परको खाल्डमा परेर इन्तु न चिन्तु भयो,” निधारमा लागेको घाउ देखाउँदै रोउँलाझैँ गरिन् उनी ।
पसलमा ग्राहक आइरहने । आफू अल्मलिएका बेलामा सडकको खाल्डामा नपरोस् भनेर बालकको ज्यान पो जोगाएकी रहिछन् तिनले । शीताङ्ग भएँ म ।
“नेपाल जाँदा हामी वाग्मतीको पानी कलकली खान्थ्यौँ । र छेउछाउका घरमा बास बस्थ्यौँ,” बाबुबाजेले यसो भनेर सुनाउँदा अहिलेका पुस्ताको मन कल्पिन्छ । नेपाल खाल्डोको परापूर्वकालको किम्वदन्तीसमेत लाग्दो हो कतिपयलाई ।
जीवसमेत बाँच्न नसक्ने गरी मृत्युतुल्य हालतमा पुर्‍याइएकी वाग्मतीको पानी ठाडो घाँटी लगाएर पिउन सकिन्थ्यो भनेर सायदै पत्याउँछन् अहिलेका पुस्ताले ।
तर, साँचो यही हो । विक्रम् सम्वत् २०४३ सालसम्म काठमाडौँ पूर्वोत्तर काँठ क्षेत्रका रैथानेहरूको खानेपानीको मुख्य स्रोत थियो, वाग्मती । जतिजति सहरमा शिक्षा र चेतना झाँगिदै गयो त्यति नै वाग्मती प्रदूषित बन्दै गइन् । बीस वर्ष नपुग्दै वाग्मतीको अस्तित्व निमिट्यान्न भयो । ढलमतीमा पो रूपान्तरण भइन् वाग्मती ।
सप्ताहान्त वाग्मती सफाइका शृंखलाले शतक पार गरिसकेको छ । राज्यकोषको अर्बौं रकम स्वाहा भइसकेको छ । तथापि, वाग्मतीले नदीको रूप धारणसमेत गर्न सकेको छैन ।
नदी सहरी सौन्दर्यको मानक हो तर पानीको सट्टा पैसाको खोलै बगाए पनि वाग्मती पूर्ववत् लयमा फर्कने कुनै छनक छैन ।
त्यसो त, नदी मानव सभ्यताको जननी हो, सिर्जनाको मुहान हो तर आश्चर्यको कुरा त्यही नदी मरणासन्न अवस्थामा पुग्दा पनि काठमाडौँबासी ढुक्कसँग निदाउन सकेका छन् । कदाचित् वाग्मती तटमा पुगिहाले भने दुर्गन्धले नाक छोप्छन् तर लाजले शिर झुकाउँदैनन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौँ सहर राजधानीबाट धुलोदानीमा परिणत भएको छ । भट्टीपसलमा थन्क्याइएको माटाको आदिम चुरोटदानीजस्तै !
काठमाडौँ सपनाको राजधानीसमेत हो । तर, रहरको पोकापन्तुरा बोकेर सहर पसेकाहरू काठमाडौँ भित्रिँदै छैनन् । बरु रोगव्याधको कारखानाभित्र पस्दैछन् र असाध्य रोगहरू जन्माउँदैछन् ।
विषाक्त वायु । जहरतुल्य धुलो । काठमाडौँ सरहको आधुनिक चिनारी हुन् । परम्परागत प्यागोडा शैली, काष्ठकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकलाको पुरातात्विक क्यानभास र प्राकृतिक सौन्दर्यमा दिन प्रतिदिन धुलो थपिँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।
अचेल सहरको भित्तामा संस्कृतिका चिनारी कुँदिएका छैनन् । अनेकौं विकृत मानसिकताका विम्ब पोतिएका छन् र काठमाडौंको ऐतिहासिकतालाई उच्चाटिलो तुल्याइरहेका छन् ।
सहरका बाटाघाटा असङ्गतिका प्रतीक बनेका छन् । ती दिनहुँ भत्काइन्छन् तर वर्षौं बनाइँदैनन् । सहरका प्राचीन पोखरी सुकेका छन् र बदलामा बीच सडकमा ठूल्ठूला पोखरी, ताल तलाउ खडा भएका छन् र तिनले उच्चाटपूर्ण ढंगले मृत्यु निम्त्याउँदैछन् । बिहान सारसौँदो हिँडेको मानिस बेलुका सग्लै घर फर्कन्छन् कि फर्कंदैनन् यकिन छैन ।
दैनिकजसो सहरमा सडक भत्काउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सरकारी र सरोकारवाला निकायबीच कामको कुनै समन्वय हुँदैन । खानेपानी संस्थान, सडक विभाग, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच सडक भत्काउने तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्छ तर बनाउने चासो र चिन्ता देखिँदैन ।
एउटै सडक वर्षमा तीनपटक भत्काइन्छ तर वर्षौं बित्दा पनि बनाउने सुरसार हुँदैन । मानौँ, सहरमा सरकार होइन, लाचार बस्छन् । सरकारी अड्डाहरू मालपोत कार्यालयको थोत्रो ढड्डामा परिणत भएका छन् ।
भाँचिएका पोल । चुँडिएका, गुजुल्टिएका, झोलिएका र लत्रिएका विजुलीका तार काठमाडौँका पर्याय बनेका छन् र कतिखेर मृत्यु टुप्लुक्क आइपुग्ने हो टुंगो छैन ।
––सडक पिच कहिले बन्छ ?
––ढल निकासका लागि नाला कहिले बन्छ ?
––धुवाँधुलो उड्न कहिले ठप्प हुन्छ ?
––जाम कहिले हट्छ ?
––फोहोर कहिले उठ्छ ?
सहरबासीका रेडिमेड प्रश्न हुन् यी ।
र, यिनको समवेत उत्तर छ – मेलम्ची आएपछि ।
––कहिले आउँछ मेलम्चीको खानेपानी ?
शासकसँग मूर्त उत्तर छैन ।
तर, खानेपानीको प्यासमा र मेलम्ची आउने आशमा दशकौंदेखि काठमाडौँले यी दुःख झेल्दै आएको छ । थाहा छैन, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दासम्म धुवाँ र धुलो खप्ने यी नागरिक बाँचिररहन्छन् कि मृत्यु शैय्यामा पुगिसक्छन् ।
वातावरणमा फैलिएको २.५ माइक्रोग्राम धुलोका कण स्वासप्रस्वासमार्फत सिधै मानव स्वास्थ्यमा प्रवेश गरेका छन् । यसबाट बालबालिका र वृद्धवृद्धा निकै जोखिममा छन् ।
“यसले तत्कालै असर नपुर्‍याए पनि दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्छ,” वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, “ससाना धुलाका कण श्वासप्रश्वासमार्फत फोक्सोमा पुग्दा फोक्सो खराब हुने, मुटुमा पुगी रक्तप्रणाली नै बिगार्ने र मस्तिष्कघात हुने जोखिम पनि हुन्छ ।”
पछिल्लो समय मुटुसम्बन्धी गम्भीर रोग बढी देखापर्नुमा वायुप्रदूषण नै मुख्य कारक भएको विज्ञको ठहर छ । त्यस्तै स्नायु प्रणालीमा दख्खल पुग्दा पक्षघात हुने डर पनि त्यतिकै छ ।
वायुप्रदूषणले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा ठूलो असर पुर्‍याउँछ । गर्भमा विकसित हुँदै गरेको भ्रूणमा प्रत्यक्ष असर परी बच्चा विकलाङ्ग जन्मने खतरा हुन्छ । यसर्थ, अहिलेको काठमाडौँको धुलोले तीन पुस्तासम्म पिरोल्ने निश्चितै छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार डिजेलबाट चल्ने वाहनबाट निस्किने धुवाँ वायुमण्डलमा मिसिँदा त्यसले फोक्सो र मूत्राशयको क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउँछ ।
त्यसो त धुलोको जोखिममा मात्र छैन काठमाडौँ । धुलोका कारण सवारी साधनको एयरफिल्टर बिग्रने र त्यसले फाल्ने कालो धुवाँ सास फेर्ने हावामा मिसिँदा क्यान्सरलगायत गम्भीर प्रकृतिको रोग उत्पन्न गर्ने दोहोरो, तेहेरो समस्याको मारमा पनि छ काठमाडौं ।
फेरि हामीकहाँ सडक होइन सोच साँघुरो छ भन्छन् तुलाधर । अहिले त्रिपुरेश्वर–कलंकी, कलंकी–तिनकुनेलगायत ठाउँहरूमा सडक विस्तार भइरहेका छन् । तर, त्यहाँ फुटपाथ नै छैन । त्यसले सवारी चापलाई न्युनीकरण होइन दुर्घटनालाई बढावा दिइरहेको छ । कलंकी– तिनकुने सडक विस्तार त भइरहेको छ तर त्यहाँ बाटो काट्ने ठाउँ छैन । “झन्डै १२ किलोमिटर सडक खण्डमा बाटो काट्न ३ वटा ओभरहेड ब्रिज बनाइँदैछ । चारकिलोमिटरको दूरी हिँडेर कसले बाटो काट्छ ?,” उनको प्रश्न छ ।
सरकार बेलाबखत सडक बिस्तार त गर्छ तर वर्षेनि १४ प्रतिशतको संख्यामा वृद्धि हुने सवारी रोकथाम गर्न सक्तैन । त्यसैले काठमाडौंले धुलो धुवाँबाट तत्कालै मुक्ति पाउने कुनै सम्भावना छैन ।
सवारीलाई हेरेर सडक भत्काउने बनाउने गरिरहने हो भने काठमाडौँ दीर्घकालीन समस्याको चङ्गुलमा पर्ने र असाध्य रोगहरूको उत्पादनगृह बन्ने दाबी गर्छन् तुलाधर ।
त्यस्तै जाडोयामको वायुप्रदूषणको अर्को कारक फोहोर बाल्ने चलन पनि हो । घरमा जम्मा भएका फोहोर सल्काएर आगो ताप्दा पनि मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ र रोगको जोखिम बढिरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा वायुप्रदूषणबाट वर्षेनि ९ हजार ९४३ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । यो विक्रम सम्वत् २०७२ सालमा नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या भन्दा बढी हो ।
त्यस्तै यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुनुका साथै सहरको सौन्दर्यमा आघात पुर्‍याउँछ र पर्यटकको आगमनलाई रोकिदिन्छ । विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार वायुप्रदूषणका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ४ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने देखाएको छ ।
पेट्रोलमा एक रुपैयाँ भाउ वृद्धि भए सहरमा आगो बल्छ तर सडकमा खाल्डाखुल्डी भए कहीँकतै विरोधका स्वर सुनिँदैन । भवितव्य परे सडक जल्छ, सडकका रेलिङ, बार ढल्छ तर बाटो नबनेर दिनहुँ अंगभंग हुँदा, कति मृत्युको मुखमा पुग्दा मुक दर्शक बन्छन् – युवा विद्यार्थी ।
विषाक्त धुलाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ । वृद्धवृद्धा, प्रौढमात्रै होइन बालबालिकामा समेत निमोनिया, फोक्सोमा संक्रमण देखिन थालेको छ । अस्पतालमा बिरामी थुप्रिन थालेका छन् ।
रोग विशेषज्ञहरू भन्दैछन्– काठमाडौँको धुलो, धुवाँ बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने फोक्सोमा संक्रमण, छालाजन्य रोग, आँखाको एलर्जीमात्रै होइन, क्यान्सरजस्ता खतरनाक रोग फैलने दिन टाढा छैन ।
तराईको शीतलहरले झैँ काठमाडौँको धुलोको जहरले नागरिकहरू ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । एक्काइसौैँ शताव्दीमा यसभन्दा ठूलो मानवताविरुद्धको अपराध अर्को के हुन्छ ? प्रकृतिले निःशुल्क प्रदान गरेको स्वच्छ हावा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सरकाले ठिँगुरामा हाल्न मिल्छ ? यो भ्रष्टाचारमात्र होइन नागरिकमाथि अमानवीय अत्याचार पनि हो ।
गाउँबाट दुःख कष्ट, विपद् झेलेर सुख पाउने आशामा सहरमा ज्याला मजदुरी गर्न आएका हुन् नागरिक मृत्यु बक्सिसमा लिन होइन । प्रदूषणको कारक अत्यधिक जनघनत्वमात्र होइन, सरकारको लोकतो पनि हो । कर तिरेको राज्यको भर नगर्ने हो भने कसको भरोसा गर्ने ?
अतः धुलोबाट ज्यान गुमाउनु, यो फगत मृत्यु होइन । सरकारद्वारा नियतवश गरिएको हत्या हो ।
जनता सरकारको टाट्नाका बँधुवा होइनन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्वतन्त्रताको प्रयोग उनीहरूको हक हो ।
संविधान निर्माण र निर्वाचनमार्फत संक्रमणकालको जटिल अध्याय पूरा गरेको सरकारले हठात् विकासको आशा पूरा गर्न सक्तैन, स्वाभाविक कुरा हो यो । तर, प्रकृतिले नै जन्मजात दिएको स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि क्रूर अतिक्रमण किन ? संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार त बिनासर्त उपलब्ध गराउने दायित्व बोकेको सरकारले सफा हावामा सास फेर्ने अधिकारलाई अधिकारलाई कुण्ठित तुत्याउन मिल्छ ?
विवेकशून्य सरकार जवाफ फर्काउँछ – माक्स लगाएर ओहोरदोहोर गर्नु ?
सरकार लाचारी हो कि माक्सको व्यापारी हो ? छुट्याउनै हम्मेहम्मे परिसक्यो ।
तर, आफूमाथि यति जघन्य अपराध हुँदा पनि सरकारविरुद्ध नागरिक चुँ बोल्दैनन् । अतिशय पीडालाई पचाएर कामकाजमा खटिएका छन् । आफ्नै वाद, विचार, व्यवस्था, आग्रह, पूर्वाग्रहको पगरी गुथेर विवेकशून्यहरूको भिडमा समाहित गराउन उद्यत छन् ।
नागरिकमाथि सरकारको कुकृत्यको साक्षी बसिरहने र लाछी बनिरहने हो भने अकाल मृत्युले छिट्टै ढोका ढक्याउन सक्छ । बेलैमा जागरूक बनौं ।